Isoanala : Dahalo 17 maty voatifitra avy eny ambony helikoptera -
AccueilRaharaham-pirenenaIsoanala : Dahalo 17 maty voatifitra avy eny ambony helikoptera
Dahalo 17 tamin’ireo manodidina ny 20 mahery maty voatifitry ny zandary , ny miaramila, ny BIA (Bataillon Inter-Armes) ary ny USAD, avy eny ambony “hélicoptère” sy nandritra ny fanarahan-dia, tany amin’ny Distrikan’Isoanala, ny talata lasa teo, no hita faty hatreto. Mbola mitohy kosa ny fitadiavana sy ny fanisana ny vata mangatsiakan’ireo izay latsaka any anaty rano. Nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 01 ora tolakandro, no nirefodrefotra ny basy tany an-toerana. Indroa niantoana ny fifandonana sy ny fifampitifirana variraraka tamin’izany. Manodidina tamin’ny 10 ora maraina ny voalohany, izay nampiasaina ilay angidimby, efa vonona tsy lavitry ny toerana nisehoan’ny fifanenjehana. Ampolony mahery raha ny fampitam-baovao avy amin’ny amin’ny kolonely Théodule Ranaivoarison no lavo nandritra izany. Nisy tamin’ireo malaso ireo no nitsoraka avy hatrany tany anaty rano vao naheno ny tifitra variraraka sy nahita ireo namany lavo. Nitohy ihany ny fanaraha-dia an-tongotra avy eo, ka raikitra indray ny fifampitifirana teo amin’ireo mpitandro filaminana sy ireo olon-dratsy, ka niampy am-polony tahaka izay indray ireo dahalo namoy ny ainy.” Rehefa vita ny fanarahan-dia voalohany tamin’ny alalan’ilay helikoptera, dia napetrak’ireo dahalo tao amina farihy misy rano, vohitra sy ala ireo omby, ka nanohy ny fanenjehana fanindroany indray ireo zandary nandeha an-tongotra. Teo no nisian’ny fifandonana fanindroany”, hoy ihany ny fanamarinam-baovao avy amin’io kolonely io.
Araka ny nambaran’ny kolonely Theodule Ranaivoarison hatrany, dia an-dalana ho any Ambindamahery, izay toerana fieren’ireo dahalo avy nangalatr’omby miisa 53, tao Beraketa, Distrikan’i Bekily, faritra Androy, ny faran’ny herinandro lasa teo izy ireo, no naheno trangana halatr’omby miisa 130 tao amin’ny tanàna iray, ao amin’ity distrikan’i Soanala ity, ny talata tokony ho tamin’ny 02 ora maraina, ka nandray ny andraikiny tamin’ny fanarahan-dia avy hatrany. Tsy nampoizin’ireo dahalo mihitsy noho izany ny fiavin’ireo mpitandro filaminana efa nivonona ara-pitaovana tamina hetsika hafa, saingy niditra an-tsehatra tamin’ny fanenjehana azy ireo izay nihevitra izany ho maivana, kinanjo nahalavoana malaso ampolony maro . Tamin’ny 01 ora tolakandro no vita tanteraka ny fanarahan-dia, ary efa tafaverina tany amin’ny tompony ireo omby 127 raha toa ka maty novonoin’ireo malaso ireo 03 ambiny. Mbola nanohy ny fisavana ny tanàna manodidina moa ireo manam-pahefana hatramin’ny talata hariva, fa noho ny toetr’andro izay nanorana be dia voatery namonjy ny lakazerna izy ireo. Isan’ny nahazoana izao vokatra izao ihany koa ny fanampian’ny BIA avy any Ihosy, sy ny USAD avy any Mahabo. Ankoatra izay voalaza moa, dia manatanteraka hetsika tany Tsivory sy Isoanala ary ireo kaominina manodidina, amin’izay resaka halatr’omby izay ihany ireo mpitandro filaminana.
Ho fiarovana ny vokatry fifidianana ho avy dia nandray fepetra ireo mpiara-miombon’antoka ao amin’ny fikambanana mpanara-maso fifidianana (Organisation de surveillance des élections na CSI-EMO) fa haka ny hevitr’ireo mpifidy aorian’ny latsa-bato. Araka ny fampiharana azy ...Tohiny